Wijnaldum oo hal arin ugu baaqay saaxiibadiis kooxda Liverpool, kadib guuldaradii kasoo gaartay Manchester City – Gool FM
(Liverpool) 04 Jan 2019. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool Georginio Wijnaldum ayaa ku baaqay inaysan iska luminin kalsoonida ay soo qabeen tan iyo bilawga xili ciyaareedkan, kadib markii ay la kulmeen guuldaradooda ugu horeesay xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
kooxda Manchester City ayaa ugu dambeyn soo gaba gabeysay rikoorkii guuldaro la’aanta ahaa ay kooxda Liverpool ku soo jirtay tan iyo bilawgii xili ciyaareedkan, kadib markii ay ku garaaceen 2-1.
Wijnaldum ayaa kadib marka ay dheesha soo idlaatay wuxuu la hadlay shabakada “Sky Sports” wuxuuna ka hadlay guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Manchester City.
“Waxaan filayaa inuu ahaa kulan aad u wanaagsan, kuma bilaaban si wanaagsan, Man City ayaa naga fiicneyd qeybta hore ee ciyaarta, waxaan sameenay fursado badan balse nasiibka ayaa inaga maqnaa”.
“Qeybtii labaad, waxaan u ciyaarnay si ka fiican, waxaan abuuray fursado badan, ma ahayn kuwo nasiib leh, sababtoo ah fursadaha oo kaliya kama tarjumayaan goolal, xili aan sidoo kale si fiican u difaac tamin waxayna dhaliyeen goolal”.
“Waxaan dhamaanteen isku dayeynay inaan ku qasabno kooxda kale inay qaladaad sameeyaan, balse labada kooxoodba waxay iska qasaariyeen kubado, waxaan awoodnay in aan wax walba ka sameyno kulankan, balse ugu dambeyn waan guuldareysanay waxaana dareyneenaa niyad jab, balse waa inaan ilaashanaa kalsoonida nafteena”.
“Mar walba waan ka niyad jabnaa marka aan la kulano guuldaro kulan kasta uu noqdo, gaar ahaan marka ay arintu tahay inaan sameyno fursado badan, waxaan dareemi lahayn farxad aad u weyn xitaa hadii ciyaarta ahaan lahayd barbar dhac”.
Si kastaba Manchester City ayaa wali ku hogaamineysa 54 dhibcood horyaalka Premier League, halka Manchester City ay sare u soo qaaday dhibcaheeda waxayna haatan booska 2-aad ugu jirtaa 50 dhibcood.
Louis van Gaal oo ka warbixiyay saxiixa kaliya ay sida aadka ah ugu baahan tahay kooxda Barcelona xiligan